पोउवासंघको पदाधिकारीमा २ जना महिला सुरक्षित ! – Arthik Awaj
पोउवासंघको पदाधिकारीमा २ जना महिला सुरक्षित !
By आर्थिक आवाज २०७५ भाद्र २८ गते बिहीबार ०४:५० मा प्रकाशित
पोखरा, २८ भदौ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्थाले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई बृद्धि गरेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व बिनाको कुनैपनि संघ–संस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । महिला सशक्तीकण, महिला अधिकार र समानता लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग गरेको छ ।
कतिपय संघ–संस्थाले कोटा नै छुट्याएर महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँछन् भने कतिपय संघ–संस्थामा समझदारी, समन्वय र सहमतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने चलन बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बृद्धि भएसँगै निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा पनि महिला सदस्यहरु बढिरहेका छन् । यसले महिला उद्यमीको संख्या बढेको देखाउँछ ।
संघमा पछिल्लो समय दुई प्यानलमा निर्वाचन हुन थालेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व बिना प्यानल बलियो नहुने भएपछि चिनिएका, राम्रो काम गरेका, नेतृत्व क्षमता भएका महिलाहरु खोजेर संघमा उम्मेदवार बनाउने क्रम बढेको छ । सदस्यमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा पनि महिला उम्मेदवार बढेका छन् । अघिल्लो ३१औं महाधिवेशनमा ६ जना अध्यक्षका उम्मेदवार मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार थिइन्, हिरा भट्टराई । संघको नेतृत्व लिने पहिलो अध्यक्ष बन्छु भनेर उनले सहास गरिन् । नजिता पुरुषको पक्षमा गयो, चुनाव जिते विश्वशंकर पालिखेले ।
वाणिज्य उपाध्यक्षमा दुई जना पुरुष उपाध्यक्षलाई जितेर विन्दु कोइराला सुवेदीले इतिहास रच्न सफल भएकी थिइन् । अहिले उनले अध्यक्ष बन्ने महात्वाकांक्षा बोक्दै हिडेपनि अन्तत उद्योग उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन् । यसपटक संयोग नै मान्नुपर्छ, पदाधिकारीमा महिलाले पुरुष उम्मेदवार हराउनुपर्ने बाध्यता छैन । कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न महिला उद्यमी गीता कुमारी तिवारी गौतम आएकी छन् । पदाधिकारीकै अर्को महत्वपूर्ण पद उपमहासचिवमा पनि दुई जना महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । महिला उद्यमी सीता बराल र चीनु गुरुङ उपमहासचिवमा आमनेसामने हुँदैछन् ।
संघको यस पटकको चुनाव महिला उद्यमीहरुको प्रतिनिधित्वका हिसावले महत्वपूर्ण रहने भएको छ । उद्योग उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा दुईवटै प्यानलबाट महिलाले मात्र उम्मेदवार दिएकाले जसले चुनाव जितेपनि पदाधिकारीमा दुईजना महिला सुरक्षित हुने निश्चित भएको हो ।
गीता तिवारी र सीता बरालले अध्यक्षका उम्मेदवार दामु अधिकारी प्यानलबाट र विन्दु कोइराला र चीनु गुरुङले अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार रवीन्द्रबहादुर प्रजूू प्यानलबाट उम्मेदवार दर्ता गरेका छन् । संघको ३२औं महाधिवेशन असोज ५ र ६ गते हुँदैछ ।